Ayaa iska leh Teleprospectringing? | Martech Zone
Ayaa iska leh Teleprospectringing?
Talaado, Janaayo 19, 2016 Talaado, Janaayo 19, 2016 Jenn Lisak Golding
Xilligan la joogo, is jiid jiid dagaal oo u dhexeeya Iibinta iyo Suuqgeynta ayaa ku hanjabaya beddelaad, waxsoosaar iyo mooraal ururo badan oo iib ah - laga yaabee inaad iska leedahay, xitaa.
Ma hubo in tani adiga ku khuseyso?
Ka fikir su'aalahan ururkaaga:
Ayaa iska leh qeyb ka mid ah safarka iibka?
Maxaa ka dhigan hoggaan u qalma?
Waa maxay horumarka macquulka ah ee hogaamiye u rogay-iibsade?
Haddii aadan uga jawaabi karin su'aalahan si hufan, kalsooni iyo heshiiska u dhexeeya Suuqgeynta iyo Iibinta, waxaad lacag kaga tegeysaa miiska. In badan oo ka mid ah.
Layaab ma leh 79% suuq geynta suuq geyn waligood looma badalayo iibka.
Waa tan sida dhaqamada loo barbardhigo:
caadiga Horumar Lead DHUFEYSKA Horumar Lead
Kaararka suuqgeynta ayaa horseeda iibka. Suuqgeynta iyo Iibka waxay ku heshiiyeen shuruudaha hogaanka iyo u qalmida.
Iibinta ayaa u aragta wax aan qiimo lahayn, joojinta dabagalka. Qabashada suuqgeynta ayaa horseed u ah dadaallada gudaha.
Leads waxay ku dhintaan geedka canabka ah iyaga oo aan helin nafaqo ku filan. Suuqgeyntu waxay kobcisaa, raadraacdaa iyo dhibcaha hogaaminta habdhaqanka iyada oo loo marayo suuqgeynta iyo cabbiraadaha
Suuqgeyn la'aanta muuqaal iyo faham ku saabsan sababta hoggaamiyeyaashu aysan u beddelayn. Tilmaamaha u qalma ayaa loo gudbiyaa iibka.
Kalsooni la’aan iyo khilaaf ayaa badan. Cadaadiska fadeexada ayaa dhacaya. Iibintu waxay ku baaqeysaa hogaamiyayaal aqoon leh, waxay xireysaa heshiisyada.
Biyo raaci. Cunista Ku celi Xaqiiqda! Lacag baad heleysaa, wax dadaal ah laguma lumin hoggaamiyeyaasha tayada hooseeya, qofna ma doonayo inuu is dilo.
Akhriso faahfaahinta soo socota, xushmadda MonsterConnect, in la barto:
Sifooyinka barnaamijyada beddelidda hooseeya
Isku-darka saxda ah ee is-beddelka sare, Iskaashiga Suuq-Iibka
Yay tahay inuu mas'uul ka noqdo hogaaminta gen & barbaarinta
Jooji isjiidjiidka dagaalka ee u dhexeeya Suuqgeynta iyo Iibinta, oo ka dhig labada koox guuleysta.
Tags: wac farsamadahagaajinta barbaarintamarketingiibinta dibaddaSaadaalindardargelinta iibkaKordhinta Iibkaiibka infographicteleprospecting